Ngingayithola imali yami, iWikipedia? | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 25, 2007 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 16, i-2016 Douglas Karr
Angiyena umnikeli omkhulu Wikipedia. Kodwa-ke, esikhathini esedlule nginikele ngemali ethile esisekelweni futhi ngafaka okuqukethwe kusayithi labo. Ngiyayithanda iWikipedia… Ngiyisebenzisa ngaso sonke isikhathi futhi ngiyikhomba njalo kubhulogi yami. I-Wikipedia nayo yangisiza - yakha amanye ama-hits wesiza sami KANYE ne-Wikipedia yathuthukisa izinga lami lesiza jikelele ngezixhumanisi ezibuyela kimi.
Ngokunikwa lo mbono, ngabe lokhu bekungasikhona isimo sokunikela nokuthatha? Nginikeze iWikipedia imali nokuqukethwe. Ngokuphindisela, banginikeze inqanaba lokusesha elithuthukisiwe lamahithi aqondile.
Manje Wikipedia is engeza akukho okulandelayo kuzo zonke izixhumanisi zangaphandle. Lokho ngokuyisisekelo kudonsa isikhombisi esibaluleke kakhulu kubhulogi lami, ngakho-ke akungabazeki ukuthi ngizolahlekelwa ukubekwa kwenjini yokusesha ngenxa yesinqumo.
Ngicabanga ukuthi bekungeke kungikhathaze ngaphandle kokuthi sobabili sizuzile ebudlelwaneni bethu bebhizinisi esikhathini esedlule. I-Wikipedia ithole kuphela indawo enhle yokusesha injini ngoba:
Abantu banikele ngokuqukethwe
Abantu baxhunywe kulokho okuqukethwe
Ngakho-ke, nangu umbuzo we- $ 10. Singakwazi yini ukubuyisa imali yethu, iWikipedia? Ushintshe ubudlelwano bebhizinisi nabo bonke abanikeli bakho ngaphandle kokubabuza kuqala. Mhlawumbe awukufanele, futhi.
Kubafundi be- my iposi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, uzojabula ukwazi ukuthi UNGAKWENZA ngcono amazinga akho ngokuphawula ngesixhumanisi esibuyela kuwebhusayithi yakho. Ngikhubazekile akukho okulandelayo kubhulogi lami. Ngakho-ke phawula kude! Nikeza ngokuqukethwe okuhle futhi uvune izinzuzo!
Tags: akukho okulandelayoizixhumanisi ezingenaluthorel = akukho okulandelayowikipedia
Jan 25, 2007 ku-2: 09 AM
Ubonile Umkhankaso ka-Andy Beal ukwenza abantu "bangalandeli" izixhumanisi zabo ku-Wikipedia? Kubonakala kulungile kuphela.
Angiwuqondi umqondo ophathelene nalesi sinyathelo sakamuva seWikipedia. Iphuzu eliphelele lezixhumanisi kumakhasi e-Wikipedia ukubhekisa kumasayithi ama-athikili akhipha okuqukethwe kwawo kuwo. Uma amasayithi akhonjisiwe engathenjwa ngokwanele ukuba abe nezixhumanisi ezijwayelekile, kungani kufanele athembeke njengezinkomba ze-athikili? Ngiyakuqonda ukungeza i- "nofollow" kuzixhumanisi ezintsha kuze kube yilapho bethola uhlobo oluthile lokubuyekezwa, kepha ukuyengeza unomphela kuzo zonke izixhumanisi eziphumayo kubonakala kungalungile.
Jan 25, 2007 ku-5: 40 AM
Ngisho nami ngazizwa ngendlela efanayo! I-wikipedia isiphoxile!
Jan 25, 2007 ku-8: 43 AM
Yonke inkinga engafani nalutho ithakazelisa kakhulu. Ngokungabi namathegi angenalutho ukhuthaza ukuphawula, kepha futhi ukhuthaza ukugaxekile (futhi wenze ogaxekile abathola ngokusebenza kangcono). Ngithole ukuthi i-Akismet izosebenza ngokwanele ukuthi ngiyavumelana nalokho okwenzayo…
Ngokuqondene neWikipedia - ukudlala nje ummeli kasathane- anginasiqiniseko sokuthi wonke umuntu ububona njengobudlelwano bokupha / bokuthatha, ngomqondo wezezimali. Yebo, ukushintshaniswa kolwazi, kepha ukwenza kusuka kusevisi yamahhala efana naleyo coud nakanjani kwenza umphakathi ube nesiyaluyalu. Ukube ubungeza okuqukethwe okuhle nezixhumanisi ezifanele, kufanele kube kuhle, kepha bangaki abagaxekile abavinjelwe yi-Wikipedia engeza lawo mathegi angenalutho? Futhi, imali onikela ngayo imvamisa ukuxhasa isiza osisebenzisela ukuthola ulwazi, hhayi i-kickback; )
Jan 25, 2007 ku-8: 47 AM
Uletha iphuzu elihle, kepha angazi ukuthi izibalo ziyini phakathi kwabaxhasi nabanikazi bamawebhusayithi anezixhumanisi ezikwi-wikipedia. Ngingacabanga ukuthi iphansi, kepha kuseyiphuzu elihle, kepha hhayi elilodwa abazolinakekela - ngoba iphuzu lalesi sinqumo esisha bekuwukuqeda ukuzinyusa (ngicabanga ukuthi ungeze isixhumanisi sakho ku wikipedia?)
Unikele enhlanganweni engenzi inzuzo, awukhokhelanga insizakalo.
Jan 25, 2007 ku-8: 57 AM
Umbuzo ngukuthi unikele ngani kuWikipedia? Ngabe bekuwukuhlinzeka ama-backlinks kubhulogi yakho noma bekungasiza ukusiza ukwakha i-encyclopedia? Uma ubungaphikisana nokuthi umnikelo wakho ubuyiswe, i-Wikipedia ingaphikisana neyokugcina. Azikho ngaphansi kwesibopho sokusiza ngezikhundla zenjini yakho yokusesha, yize bekuhlale kuyibhonasi enhle.
Kuyihlazo ukuthi ukuhlukunyezwa kohlelo kuholele ekuqalisweni kokulandelayo, kepha akuphazamisi nhlobo inhloso yeWikipedia.
Jan 26, 2007 ku-12: 59 AM
Okokuqala, ngiyabonga ngokususa okungafakwanga kubhulogi yakho. Nami ngenze okufanayo kwezami.
Ngokwengeza okulandelayo ku-Wikipedia, ababhekani nenkinga kepha uphawu nje.
Jan 26, 2007 ngo-1: 01 PM
Uphakamisa umbuzo othakazelisayo. Ngicabanga ukuthi ngabe iWikipedia ikhethe ngamabomu ukusebenzisa lo msebenzi ngemuva kokuthola iminikelo. Ngicabanga ukuthi bathathe imali babaleka.
Feb 2, 2007 ngo-2: 08 PM
Ayikho i-Plugin Yokulandela
Amakhasimende amaningi Ukuthengisa Okungeziwe
May 27, 2007 ku-4: 31 PM
Nginomuzwa wokuthi izixhumanisi ezingekho ekugcineni zizogcina (zingase zikwenze konke) ukufaka isandla ezingeni lakho le-injini yokusesha.
Cabanga nje ukuthi siyini isixhumanisi esingenalutho: Yisixhumanisi samahhala esingenabandlululo, esingenasiphamela nesinokuhahela i-PR ku-Net. Yikuphi injini yokusesha emiqondweni yabo efanele engangayinaki le mininingwane eyengeziwe ekubalulekeni kwamawebhusayithi.
Nginesiqiniseko sokuthi iGoogle inezinga eliyimfihlo elingafakwanga lamakhasi ewebhu 🙂
May 29, 2007 ku-11: 09 AM
Ngitshelwe ukuthi iWikipedia nayo ayangezanga ukulandela izixhumanisi zokuphawula
Jun 28, 2007 ku-12: 01 PM
Ukushintshela ekulandeleni kwakuyisinyathelo esidukisa kakhulu esasizothathwa yi-wiki futhi ngiqinisekile ukuthi bahlupheka ngokwendalo yokuqukethwe njengomphumela. Ngakolunye uhlangothi akukubi konke, usengathola ithrafikhi kuzixhumanisi zakho.
Aug 16, 2007 ku-7: 31 AM
Ngigxumele kumdlalo webhulogi muva nje, lapho i-wikipedia isivele isisebenzise into engekho, ngakho-ke ngaphuthelwa yiso leso sikebhe. Mangisho kodwa, ukuthi ngixhumanise ne-athikili kwenye yamabhulogi ami asekhasini le-wikipedia futhi isengumnikeli omkhulu wethrafikhi.
Feb 3, 2008 ngo-4: 11 AM
KULUNGILE ngizama ukwehlisa lo mqondo wokulandela / cha, futhi manje ngiyawuthola! Ingabe uthi uthumele i-athikili ku-Wiki enesixhumanisi sakho kuyo, i-google ngeke iyilandele, kodwa abantu bazoyilandela? Ngomqondo ophilayo, lokho kunengqondo, ngoba sifuna ukwaziswa ngabantu! Bawa-value amanani amarobhothi, futhi baphakamisa inani labantu!
Ngo-Apr 29, i-2020 ku-5: i-11 PM
Uma uvumelana ne-wikipedia kuzofanela ubuyiselwe imali yakho.